Mepụta ajụjụ maka n'efu - Fyrebox
Mee ajụjụ nke gị maka weebụsaịtị ma ọ bụ Blog
Mepụta ajuju iji wee nweta ndu, zie gi ihe ma obu imesi tinye ndi na ege gi nti.
Mee njemMepụta ajụjụ maka n'efu
Otu Quiz, Formdị Abụọ
Ndewo ndị ọchụnta ego!
Ingmepụta ajụjụ nwere ike inyere gị aka azụmaahịa gị
Mee ajụjụ nke onwe gị iji wee na-eduga ndị mmadụ. Ma ihe ndị ị na-eduga bụ azụmahịa na azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa nye onye na-azụ ahịa, ajụjụ a bụ ụzọ dị mma iji mepụta edu gị na weebụsaịtị gị, na peeji ọdịda ma ọ bụ na mgbasa ozi mgbasa ozi.
You nwere ike izipu data anakọtara site na ajụjụ gị na akpaghị aka karịa ngwa 300.
Enwere ike iji ihuenyo ikpeazụ nke ajụjụ gị gbaa ihe omume. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ibugharị okporo ụzọ gaa na ibe Facebook gị, ma ọ bụ na ibe ọzọ nke weebụsaịtị gị.
Mepụta onwe gị ajụjụ
Ndewonu ndi nkuzi!
Ajụjụ nwere ike ịkụziri ụmụ akwụkwọ gị ihe ọ bụla. Site na ulo akwukwo ulo akwukwo rue ulo akwukwo, ajuju a na - eme ka mmuta tinye ihe ndi ozo ma nwekwa obi uto. I nwekwara ike nwalee ihe omuma nke umu akwukwo gi ma nweta ihe ha choputara na ezigbo oge.
Ajụjụ gị na-edetu ndị na-egwu ajụjụ gị na azịza ha na-akpaghị aka.
Can nwere ike ịhọrọ ịnata mkpesa maka ndị ọkpụkpọ ọ bụla ma ọ bụ bupụ ha niile
N ’akụkọ ndị ahụ, ị nwetala azịza nke ndị na-egwu egwuregwu, oge ha nọrọ na ajụjụ gị na akara ha.
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịme ajụjụ
Onu ogugu enwere ugbua banyere ihe achoro bu ha na egosiputa ha Na egosiputa ha n'otu eserese iji nyere gi aka igh ota data ngwa ngwa
Iji ajụjụ gị dịka nyocha ihe omimi
Edekọtara ọnụ ọgụgụ na akpaghị aka. Onu ogugu ndi n’egwuregwu (ihe ndi n’egha n’agha na ndi n’edighi nke oma) na ndi n’eguru onu ogugu n’iile di oge. Onu ogugu maka onu ajuju a juru kwa.
KA EGO NA-EGO NA-EGO